नेपालीहरुको जीवनशैली कोरोना संक्रमण नबढ्ने कारण हुनसक्छ ? – Nepal Japan
नेपालीहरुको जीवनशैली कोरोना संक्रमण नबढ्ने कारण हुनसक्छ ?
नेपाल जापान २८ चैत्र ११:५१
विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु कोरोना भाइरसका संक्रमणबाट आक्रान्त भैरहेका बेला दक्षिण एसियाको सानो गरीब मुलुक नेपालमा भने संक्रमण अत्यन्त गनण्य मात्र देखिएको छ । यसलाई विज्ञहरुले नेपालीहरुको जीवनशैलीका कारण पनि संक्रमण नभएको तर्क गर्न थालेका छन् तर, उनीहरु यसमा ठोकुवा भने गर्न सक्दैनन् ।
हुन पनि कोरोना संक्रमण सुरु भएको १०० दिन पुग्दैगर्दा विश्व हायलकायल भैरहेका बेला नेपालमा हालसम्म नौजना मात्र संक्रमित भेटिएकामा एकजना निको भैसकेका छन् र आठ जनालाई विभिन्न स्थानमा आइसोलेशनमा अर्थात् अलग्गै राखेर उपचार गरिँदैछ ।
भेटिएका संक्रमित ८ जना विदेशबाट आएका र एकजना मात्र स्थानीय हुन् । यसबीचमा १ सय ३४ जनालाई संक्रमणको आशङ्कामा आइसोलेशनमा राखिएको छ । उनीहरूको परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
नेपालमा संक्रमण नै नभएको कि पत्ता नलागेको ? अहिले यो जिज्ञासापूर्ण प्रश्न व्यापक छ । यस विषयमा बिबिसि नेपाली सेवाको रिपोर्ट यस्तो छ-
नेपालको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सुरुमै नेपालले विदेशबाट आउने नागरिक तथा विदेशीहरूलाई क्वारन्टीनमा नराखेका नेपालमा अरू व्यक्ति पनि सङ्क्रमित भएको हुन सक्ने केही जनस्वास्थ्यविज्ञ र टिप्पणीकारको आशङ्का छ।
तर केही विज्ञहरू नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि एउटा स्थानमा एकै खाले लक्षण देखिएर धेरै मानिस बिरामी भएको वा तिनको मृत्यु भएको नदेखिएकाले त्यस्तो आशङ्का पुष्टि गर्न नसकिने तर्क गर्छन्।
स्वास्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधवारसम्म कुल २,३६६ वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ।
त्यसमध्ये नौवटा मात्र सङ्क्रमण देखियो।
‘नेपाल जर्नल अफ एपिडिमियोलोजी’मा हालै प्रकाशित एउटा लेखमा पनि नेपालमा परीक्षण नै कम भएको उल्लेख गरिएको छ।
“हामी धेरै पानी खेलाउने रहेछौँ अनि खानेकुराहरू पनि धेरै पकाएर खान्छौँ। त्यस्तै हात मिलाउने, अङ्कमाल गर्ने वा म्वाइँ खाने चलन पनि हाम्रोमा कमै छ। यस्ता क्रियाकलापले कोरोनाभाइरस फैलिनबाट रोकेको हुन सक्छ।”
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि अहिले उक्त खोपलाई लिएर विश्वभरि नै बहस चलिरहेको छ। नेपालमा पनि बालबालिकाहरूलाई यो खोप अनिवार्य रूपमा लगाइदिने गरिन्छ।
त्यस्तै ठूलाठूला लिफ्टजस्ता पूर्वाधारमा कोचिएर मानिसहरू बस्ने तथा एक जनाले छोएको स्थानमा अर्कोले छुने क्रियाकलाप हुने गर्छन्। तर नेपालमा काठमाण्डूभित्र केही स्थानमा बाहेक अन्यत्र यस्ता पूर्वाधार नै नभएकाले पनि सङ्क्रमण फैलावटको साङ्लो चुँडिएको हुन सक्ने उनले बताए।
उनले भने, “त्यति मात्र होइन युरोप-अमेरिकातिर हेर्दा चिटिक्क तर पानीको खासै प्रयोग नहुने खालका शौचालयहरू पनि प्रयोगमा हुने गर्छन्। त्यसले पनि सङ्क्रमण फैलाउन भूमिका खेलेको हुन सक्छ। हाम्रोमा त चिटिक्क नभए पनि शौचालयमा पानी अनिवार्य चाहिन्छ।”